युक्रेनी संकट - छैन पोस्ट-सोभियत अन्तरिक्ष को मान्छे सामना मात्र मुद्दा छ। मा एक मुट्ठी मा rallying पूर्व नागरिकहरु को रूसी अनुयायीहरूलाई शान्ति को आशा दिनुहुन्छ जो माल्डोवा, विरोध फीका छैन। यो सानो देश को मान्छे रूस संग नजिक सम्बन्ध नवीकरण गर्न खोजिरहेका छन्? कुन आधारमा मा माल्डोवा विरोध विकसित गर्दै छन्? आफ्नो के को लागि कारण? गरेको छानबिन गरौं।
नयाँ रंग क्रान्तिको?
सेप्टेम्बर 2015 मा शान्त माल्डोवा लोकप्रिय अशान्ति नयाँ प्रविधिहरू लाग्यो। मान्छे विभिन्न pretexts अन्तर्गत बाहिर लिइएका छन्। यो एक जबकि लागि माल्डोवा को विरोध राज्य भविष्य देखेर थुप्रै तरिकामा तीतो प्रतिद्वन्द्वी सामेल कि रोचक छ। देश एकदम सानो, यो मा राजनीतिक धाराहरु विकसित छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद जनसंख्याको उच्च गतिविधि देखाउँछ। पछि जीवित को मानक कम छ, र सरकार स्थिति उपाय गर्न केही गर्छ यो बुझ्ने छ। तर पक्कै जनसंख्याको असर गर्नेछ जो संकट, को सानो। देशको विकास निर्देशन निरन्तर समाजमा छलफल भएको छ। यसलाई मा माल्डोवा समर्थक-रूसी सेना लगभग छ कि टिप्पण लायक छ। सबैभन्दा राष्ट्रका युरोपेली परिवार मा यसको वैध ठाउँ लिन खोज्ने। तर तिनीहरूले देख्ने प्रक्रिया फरक फरक। अरूलाई देश को स्वतन्त्रता रक्षा गर्दा केही, एक राज्य मा रोमानिया जडान गर्न चाहनुहुन्छ। यी विचारहरू को प्रेरकों मा माल्डोवा को विरोध सँगै ल्याए। समयमा तिनीहरूले मतभेद बिर्सन्छन्।
मानिसहरूलाई असंतोष को सार धनी आफ्नो फाइदा यसलाई प्रयोग गर्ने शक्ति बस्न सुनिश्चित थियो। सामाजिक दायित्व को कार्यान्वयन मा, कुनै एक सोच्छ। त्यसपछि त्यहाँ मिडिया देश को बजेट एक अर्ब डलर kidnapped बताए छ। यो एक महत्वपूर्ण भाग थियो। सबै divergent राजनीतिक शक्तिहरू एउटा कुरा मा सहमत: शक्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ। को protesters प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव माग। मान्छे राज्य को टाउको को परिभाषा मा भाग लिन चाहन्छु। हालको अधिकारीहरु को मतदाता को भरोसा गुमाए छन्। र थप एक कुरा बाहिर खडा: कारणहरू जो प्रकृति आर्थिक हो मा माल्डोवा को विरोध, विभिन्न शक्तिहरू एकता लागि एक मंच को उद्भव गर्न पुगे। तर, समर्थक-रूसी तिनीहरूलाई प्रारम्भिक कल। Moldovans आफ्नो देश र यसको विकास विचार। तिनीहरूले एक समाजमा एक कहिल्यै-अन्त्य बहस छ, किनभने सम्पन्न देशमा बाँच्न चाहन्छु। मान्छे सरकार अनुचित दबावपूर्ण देश को रोमानाइजेसन पकड गर्न प्रयास, आफ्नो शक्ति प्रयोग भन्ने विश्वास गर्छन्। किनभने protesters राष्ट्रिय मुक्तिको तीन वस्तुहरू विकास गरेका छन्। तिनीहरूलाई बारेमा विस्तृत मा।
गरेको नजीकको, मा माल्डोवा जसलाई विरुद्ध विरोध गरौं। यो अन्त गर्न हामी पहिले नै उल्लेख तीन अंक याद गर्नुहोस्। निम्नानुसार ती हुन्:
शक्ति चोर र usurpers देशको साझेदार आत्मविश्वास नष्ट गर्ने देखि हटाउने। पश्चिम र पूर्व दुवै पहिले नै खुल्लमखुल्ला माल्डोवा राज्य कब्जा गरेको छ भन्ने तथ्यलाई कुरा गरेका छन्।
आफ्नो राय व्यक्त गर्न dissidents विरुद्ध दमन को नीति समापन।
माल्डोवा को सार्वभौमिकताको विरुद्ध अपराध हो जो unionism को प्रचार, तत्काल अवरोध। यसको सार statehood को उन्मूलनको पछि देश रोमानिया को अवशोषण, मा निहित।
मा माल्डोवा विरोध आफ्नै स्वतन्त्रता रक्षा सम्बन्धित छन्। मानिसहरू जानिजानि यो रद्द गर्न क्षरण को राज्य मा व्यापार सञ्चालन र विदेशी नियम अन्तर्गत इलाका दिनको हालको अधिकारीहरु आरोप।
सशस्त्र formations सिर्जना को सूत्रपात
मा माल्डोवा को विरोध पछि के विश्लेषण, यो अन्य देशहरूमा पनि यस्तै घटनाहरू समानताहरु आकर्षित गर्न असम्भव छ। रंग क्रांतियों र अब धेरै थाह आफ्नो संगठन को प्रविधि बारे। Puppeteers सडक मानिसहरूलाई ल्याउन, देश मा समस्या विद्यमान छन्। आफ्नो असंतोष जानाजानी मिडिया र सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरम। त्यसैले यसलाई मिश्र, सिरिया, युक्रेनमा थियो। मा माल्डोवा, केही नयाँ अप आएको छ। तर यो जनसंख्या निर्मित समस्या प्रदर्शन गरेको छ भन्ने तथ्यलाई को संकेत उदाहरण हो। तिनीहरूले कतै बाहिर खडा छैन। पहिलो शक्ति नेतृत्व मान्छे विरोधी मान्छे निर्णय लिइरहेका छन् जो, नागरिकहरु ख्याल छैन। समय, परिस्थिति सीमा गर्न तनावपूर्ण छ जब, कार्यकर्ता मान्छे कार्यहरू विरोध गर्न को लागि कल छन्। अर्को बिन्दु - सशस्त्र स्वयंसेवकहरु को उद्भव। यो पनि माल्डोवा भयो। तर, टकराव गर्न पूर्व पुगेको छैन। अज्ञात sniper अप देखाउन थिए। ती जो संगठित विरोध मा माल्डोवा, स्वयंसेवकहरु थिए आवश्यकता गर्न भेष को उत्तेजक कार्यहरू। एक पटक त्यहाँ, सशस्त्र मानिसहरू, त्यसपछि तपाईं नागरिकहरु मार्न र तिनीहरूलाई मा दोष राख्न सक्नुहुन्छ। discontented को पक्राउ त्याग्नुपर्छ छैन, र अधिकारीहरु विरुद्ध सुरक्षित गर्न स्वयंसेवकहरु को उपस्थिति सफाइ। भनेर हामी एक क्लासिक रंग क्रान्तिको देखे मा माल्डोवा छ। तर केही भयो गलत।
यसलाई मा माल्डोवा के भयो भनेर व्याख्या गर्न digress गर्न आवश्यक छ। को तख्तापलट को कुनै पनि बाह्य शक्तिहरू को सहभागिता बिना गर्न सक्नुहुन्न भन्ने तथ्यलाई। यो देशभक्ति मिडिया सबै अमेरिकी दोष स्वीकारे, तर यो पनि गहिरो छ। विश्व वास्तवमा multipolar भएको छ। यो प्रत्येक अन्य संग एक भीषण युद्ध प्रमुख, शक्ति छ। तिनीहरूले पनि "को Rothschilds र Rockefellers।" भनिन्छ फरक: - आर्थिक केही माइक, अन्य छन्। यी clans ग्रह मा लगभग सबै स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम छन्। कुनै पनि मामला मा, जानकारी क्षेत्रमा, तिनीहरूले एक निरन्तर युद्धमा छन्। दुवै समूह को जरा पश्चिम छन्। र एक र माल्डोवा को विरोध को समयमा अन्य अन्य समस्या धेरै थिए। प्लेटफर्म लागि अर्को तख्तापलट थियो तयार, र ले लाभ को यो कुनै एक सक्छन्। यस समयमा, यो एक गम्भीर आर्थिक संकट रोक्न आवश्यक थियो। थियो साना देशहरूमा। किनभने माल्डोवा विरोध शायद प्रमुख खेलाडीहरू याद छ।
को विरोध मा माल्डोवा समाप्त
वास्तवमा, विरोध सेना परित्याग गर्न जाँदैछन्। मान्छे संसद र सहुलियत बनाउन अध्यक्ष बनाउन सक्षम थिए। यसरी, जनवरी 2016 मा त्यहाँ सरकार परिवर्तन भयो। प्रधानमन्त्री को पोस्ट को लागि कुनै उम्मेदवार विरोध सेना पूरा भएन रूपमा यो एक कठिन प्रक्रिया थियो। तिनीहरूले पनि संसद भवन को भाग लिए, तर प्रहरी दबाबमा retreated। वर्तमान प्रधानमन्त्री र आफ्नो सरकार कुलीन वर्गहरु पुरानो भन्ने नै clans छन्। मान्छे तिनीहरूलाई भरोसा छैन। तर, अधिकारीहरु मानिसहरूलाई pacify एउटा थप गम्भीर सहुलियत मा जाने थियो। मई 22 छ योजना होल्ड प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव। यो एक र्याली मंचन, र तिनीहरूले समय किसिनो को वर्ग बाँकी छन्। मा माल्डोवा किन विरोध बुझ्न, यो देश को अर्थव्यवस्था हेर्न गर्नुपर्छ। त्यहाँ कुराहरू धेरै कठिन छ।
क्रांति को आर्थिक आधार
गणतन्त्र को माल्डोवा - एक agrarian देश। यसको क्षेत्र, जहाँ मुख्य औद्योगिक उद्यम, अब ट्रांसनिस्तरिया भनिन्छ र छुट्टै राज्य हो को भाग। Moldovan उद्यमको उत्पादन पूर्व सोभियत संघ मा मुख्य रूप कार्यान्वयन गरेका छन्। पश्चिमी छिमेकी, त्यो गरिएन मा मांग किनभने को कम प्रतिस्पर्धी क्षमता। देश को प्रतिबंध उद्यम को युद्ध को शुरुवात देखि पूर्वी बजार गुमाउन थाले। को अधिकारीहरु को राजनीतिक प्रतिबद्धता अर्थव्यवस्था एउटा क्रूर मजाक प्ले। तिनीहरूले मार्केटिङ बिना आफ्नो व्यवसाय छोडेर सामूहिक पश्चिम बारेमा गयो। तर यो पर्याप्त छैन। Moldovan अधिकारीहरूले थियो जो मास्को मा समझ छैन ट्रांसनिस्तरिया को घेरा, व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छन्। प्रतिक्रिया Kremlin रूसी बजार प्रयोग गर्ने ती को दुःख मा शुरू द्वारा बलियो बनायो। रूपमा Zhirkov संचित छैन जनसंख्या चाँडै पत्रुस बाहिर थियो। माल्डोवा एक कठिन अवस्था सबै पोस्ट-सोभियत वर्ष छ। को अधिकारीहरु प्रारम्भ थिएन अवस्था उपाय गर्न, र यो मान्छे क्रोध व्यय कुनै कार्य। यो पश्चिमी योगदानकर्ता Moldovan समस्या कुनै हतारमा छन् निर्णय भनेर थप्दा लायक छ।
रूस लागि वा मा माल्डोवा विरोध?
हामी देश को विकास तर्कसंगत छ भेट्नुपर्छ भने, त्यसपछि हामी मान्छे साँच्चै पुरानो, अझै पनि सोभियत सहयोग नविकरण गर्न चाहनुहुन्छ छ कि मान गर्न सक्नुहुन्छ। रूस - एक विशाल देश, संग माल्डोवा तुलना मा धनी। त्यहाँ फल क्रेताद्वारा र रक्सी, र तरकारी हुनेछ। तर यो त छ। मा माल्डोवा बायाँ सेना भनिन्छ समर्थक-रूसी। तिनीहरूले पूर्व संग सहयोग को पक्षमा छन् भन्न। तर मानिसहरूले साँच्चै नै चाहने एकदम सानो छ। र तिनीहरू सबै सोभियत संघ देखि आउनुहोस्। जवानहरू पश्चिम हेर्दै। प्रचार यसको काम गरेको छ। जो Moldovan स्वतन्त्रता पछि अप भयो मान्छे, युरोपेली एकीकरण गर्न चाहन्छु। विरोध शक्ति समर्थक-रोमानियाली राजनीतिज्ञ को usurpation विरोध, तर पश्चिम विरुद्ध केही छैन। बायाँ सामाजिक नीति को पुनरुद्धार, शक्ति ग्यारेन्टी को कार्यान्वयन बारेमा थप कुरा हो। साधारण नागरिकहरु, खैर, रूस एउटा सम्बन्ध लागि। तिनीहरूले गुमेको शक्ति को डर छैन र तिनीहरूले, चुपचाप, सुरक्षित महसुस गर्न बाँच्न चाहन्छु।
को protesters को उपलब्धिहरू एक सानो छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो आफ्नो संघर्ष व्यर्थमा थिएन कि उल्लेख गर्नुपर्छ। को अधिकारीहरु भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाई कुरा सुरु गरेका छन्, हामी सांप्रदायिक सेवाहरु को लागि शुल्क यसको नीति परिवर्तन गर्न राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष निर्वाचन मा सहमत छन्। छ, मान्छे उहाँले महत्त्वपूर्ण निर्णय को ग्रहण प्रभावित जारी सक्ने लाग्यो। यो सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो मान्छे खडा नेताहरूले लडी सबैभन्दा नीतिहरू आपत्तिजनक को मामला मा उनलाई रक्षा गर्न, बलियो स्थिति प्राप्त गरेका छन्।
एक निरंतरता हुनेछ?
यसलाई चाँडै हामी फेरि सन्देश देख्ने संभावना छ माल्डोवा राजधानी ठूलो विरोध नवीकरण गरिदियो। घटनाहरू 2015 - 2016 को सुरुदेखि देश मा सरकार संस्थाहरू संकट सामना गर्न सक्दैन, उचित योग्यता छैन भनेर देखाए। समयमा, मानिसहरू शान्त गर्न व्यवस्थित। वसन्त भूमि नीति समय मा किसानहरु, नर्सिङ छोड्दा विशेष गरी छ। हल बाट तर देशको समस्या टाढा छन्। अधिकारीहरूले आवश्यकता विकास एक दीर्घकालीन रणनीति को आर्थिक विकास। बस, जसलाई तिनीहरूले पश्चिम वा पूर्व देखि व्यापार साथ चयन गर्न, राखे। र यो वाशिंगटन मा आफ्नै थैली र खाता promoldavskuyu स्थिति मा खडा गर्नुपर्छ, शिविर विचार र छैन। जबकि राज्य नेताहरूले एक्लै नदेखाउनुहोस्।
यो छ लायक केही शब्द भन्नुहोस् बारेमा अन्य संस्करण। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्नु कि रूस छ सिर्जित वरिपरि बेल्ट को अस्थिरता। युक्रेन राम्रो उदाहरण हो। जस्तै "ब्ल्याक होल" मा माल्डोवा खोल्न खोजे। संस्करण अवस्थित अधिकार छ। तर यो कुरा अगाडी देखिन्छ। विश्व शासकहरू बस रूसी संघ माथि तोड छैन निर्णय गरे। अब तिनीहरूले आर्थिक सम्बन्ध तोड्न युरोप बाट यो आंसू गर्न आवश्यक छ। यो दृश्य यस विन्दुमा छ, त्यहाँ षडयंत्र सिद्धान्तकारहरु छन्। तिनीहरूले अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक भयानक संकट मा पतन भन्ने विश्वास गर्छन्। म केही समय बच्न खान कसैलाई आवश्यक छ। किनभने उपलब्ध छैन रूस, सशस्त्र bristled। विकल्प युरोपेली संघ मा परे। यदि रूस ठूलो छिमेकीलाई समर्थन गर्दैन, आफ्नो अर्थव्यवस्था मात्र मामला मा सम्भव छ नाश। यो अन्त गर्न, सानो पोस्ट-सोभियत देशहरूमा ignited।
मा माल्डोवा, को युक्रेन युद्ध को विरोध बारेमा थाहा छ, नागोर्नो कराबाख छलफल गर्न धेरै छ। जताततै त्यहाँ भवदीय दृश्य को उचित विश्वास disgruntled छन्। र जो बढी पैसा मान्छे छ ती आफ्नो गतिविधि छन्। विदेशी "संसारको मालिकको" राज्य मा शक्ति उसलाई बर्बाद र स्रोतहरू extort गर्न कमजोर हुनेछ जब, बस प्रतीक्षा। किनभने पैट्रियट को अधिकारीहरु (बाटो र खराब) संग लड्न हुँदैन, र देश को लागि टाउको खडा र हतियार अप लिइरहेको सोच्नु। र यो पूर्व सोभियत संघ को सबै देशहरूमा लागू हुन्छ। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
सामान्य Dostum: अफगानिस्तान को उपाध्यक्ष-राष्ट्रपति र पूर्व warlord
को OSCE के हो? मिशन को संरचना र OSCE देख्ने
Irina Prokhorova: जीवन, साहित्यिक र सामाजिक गतिविधिहरु
Konstantin Kosachev: जीवनी, पेसा, फोटो
Medvedeva Dmitriya Anatolevicha, रूसी संघ को तेस्रो राष्ट्रपति को जीवनी
यज्ञ Vatanyar Saidovich: जीवनी र फोटो
कसरी सिपी मशरूम संग च्याउ सूप खाना पकाउनु: विकल्पहरू। सिपी को क्रीम
ग्लास प्रसोधन: प्रकार र उपकरण
बर्लिन मा एक केक कसरी खाना पकाउनु?
Ilyichevsk यात्रा: बाँकी। मनोरञ्जन केन्द्र, होटल, आवास मूल्यहरु
के: सुत्दा फटना?
आवेदन iinstruktsiya लागि वर्णन,: तयारी "एल्यूमिनियम-स्प्रे"
कसरी उपयोगी बेकिंग सोडा संग स्नान